Aịzaya 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Nna na ụmụ ya ndị na-enupụrụ ya isi (1-9)
Jehova anaghị anabata mmadụ ife ya iji mezuo iwu (10-17)
“Bịanụ ka anyị kpezie” (18-20)
A ga-amaliteghachi irubere Chineke isi na Zayọn (21-31)
1 Ọhụụ Aịzaya*+ nwa Emọz hụrụ gbasara Juda na Jeruselem n’oge Ọzaya,+ Jotam,+ Ehaz,+ na Hezekaya,+ na-achị ndị Juda:+ 2 Ndị nọ n’eluigwe, nụrụnụ. Ndị nọ n’ụwa,+ geekwanụ ntị,N’ihi na Jehova kwuru, sị: “M zụrụ ụmụ m ha etoo. M lekọtakwara ha,+Ma ha enupụrụla m isi.+ 3 Ehi na-ama onye zụrụ ya,Jakị na-amakwa ihe onye nwe ya ji etinyere ya nri. Ma ndị Izrel amaghị m.*+ Ndị m anaghị akpa àgwà ka ndị ma ihe.” 4 Unu ga-ata ahụhụ, unu mba na-eme mmehie,+Ndị mmehie na-anyịgbu,Ndị na-eme ihe ọjọọ, ndị rụkwara arụ. Unu hapụrụ Jehova.+ Unu akparịala Onye Nsọ Izrel,Gbakụtakwa ya azụ. 5 Olee ebe fọrọ n’ahụ́ unu a na-etibeghị ihe? Gịnị mere unu ka ji na-enupụ isi?+ E merụrụ unu ahụ́ n’isi unu niile. Unu na-arịakwa ọrịa obi.+ 6 O nweghị ebe dị mma n’ahụ́ unu, malite n’ụkwụ unu ruo n’isi unu. Unu merụrụ ahụ́, ahụ́ unu echihịachaa bụrụ ọnyá ọnyá. E meghị ha ọgwụ. E kechighị ha ihe. E teghịkwa ha mmanụ.+ 7 Ala unu atọgbọrọla chakoo. A gbaala obodo unu dị iche iche ọkụ. Ndị mba ọzọ nọ n’ihu unu na-eri ihe ala unu mepụtara,+Ebe niile atọgbọrọ chakoo ka ebe ndị iro bibiri.+ 8 A hapụla Zayọn ka ọ dị ka ụlọ ndò dị n’ubi vaịn,Ka ọ dị ka obere ụlọ dị n’ubi kukumba,Nakwa ka obodo a nọchibidoro anọchibido.+ 9 A sị na Jehova nke ụsụụ ndị agha emeghị ka mmadụ ole na ole ni’me anyị fọdụ,Anyị gaara adị nnọọ ka Sọdọm,Anyị gakwaara adị ka Gọmọra.+ 10 Unu ndị ọchịchị aka ike na-achị Sọdọm,+ nụrụnụ okwu Jehova. Unu ndị Gọmọra,+ geenụ ntị n’iwu* Chineke anyị. 11 Jehova kwuru, sị: “Olee uru ọtụtụ àjà unu na-achụ baara m?+ Àjà a na-esu ọkụ unu ji ebule achụrụ m+ nakwa nke unu ji abụba anụmanụ ndị ọzọ kacha mma achụrụ m+ agbụla m. Ọbara+ oké ehi+ na nke nwa atụrụ na nke ewu+ anaghịkwa atọ m ụtọ. 12 Mgbe unu bịara n’ihu m,+Ònye gwara unuKa unu zọtọọ ogige m?+ 13 Kwụsịnụ ịchụrụ m àjà na-abaghị uru unu ji ọka* achụ. Insens* unu na-amụnye bụkwa arụ n’anya m.+ Unu na-eme ememme ụbọchị ọnwa ọhụrụ,+ na-edebe ụbọchị izu ike,+ na-agbakọkwa ime ememme dị iche iche.+ Agaghị m anabata ememme ndị a unu na-eme, ebe ọ bụ na unu na-eme anwansi.*+ 14 M* kpọrọ ememme ụbọchị ọnwa ọhụrụ unu na-eme na ememme ndị ọzọ unu na-eme asị. Ha bụụrụ m ibu arọ. Ike ibu ha agwụkwala m. 15 Mgbe unu gbasara ọbụ aka unu,M na-eleghara unu anya.+ N’agbanyeghị na unu na-ekpe ọtụtụ ekpere,+Anaghị m ege ntị.+ Aka unu bụ ọbara ọbara.+ 16 Saanụ ahụ́. Dowenụ onwe unu ọcha.+ Kwụsịnụ omume ọjọọ unu nọ n’ihu m eme. Kwụsịnụ ime ihe ọjọọ.+ 17 Mụtanụ ime ihe ọma. Na-ekpenụ ikpe ziri ezi.+ Gwanụ onye na-emegbu mmadụ ka ọ gbanwee. Gbachiterenụ nwa na-enweghị nna.* Kpechitekwanụ ọnụ nwaanyị isi mkpe.”+ 18 Jehova kwuru, sị: “Bịanụ ka anyị kpezie.+ Ọ bụrụgodị na mmehie unu na-acha uhie uhie,M ga-eme ka ọ na-acha ezigbo ọcha.+ Ọ bụrụgodị na ọ na-acha ọbara ọbara ka ákwà uhie,Ọ ga-adị ka ajị ọcha. 19 Ọ bụrụ na unu ekwe gee ntị,Unu ga-eri ọmarịcha ihe ndị dị n’ala a.+ 20 Ma ọ bụrụ na unu ajụ ige ntị, nupụ isi,A ga-eji mma agha gbuo unu,+N’ihi na Jehova ekwuola ya.” 21 Obodo na-erubeburu Chineke isi+ na-agbazi akwụna.+ A na-ekpebu ikpe ziri ezi na gị.+ Ezi omume bibu ebi n’ime gị.+ Ma ugbu a, ọ bụ ndị na-egbu mmadụ* bizi n’ime gị.+ 22 Ọlaọcha dị na gị ataala nchara.+ E jirila mmiri gwagbuo mmanya ọka wit gị. 23 Ndị isi nọ na gị dị isi ike, bụrụkwa enyi ndị ohi.+ Ịna aka azụ* na-amasị onye ọ bụla n’ime ha. Ha na-achọkwa ka e nye ha onyinye.+ Ha anaghị ekpere nwa na-enweghị nna* ikpe ziri ezi,Nwaanyị isi mkpe nwee okwu, ha anaghị eleba ya anya.+ 24 N’ihi ya, ezi Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha,Dike ndị Izrel, kwuru, sị: “M ga-eme ka ndị iro m kwụsị inye m nsogbu. M ga-atakwa ha ahụhụ.+ 25 M ga-emesi gị ike. M ga-anụcha gị otú e si anụcha ọla, gị adị ọcha ka ihe e ji ncha saa. M ga-asapụkwa unyi niile dị gị n’ahụ́.+ 26 M ga-eme ka i nwee ndị ikpe otú i nweburu. M ga-emekwa ka i nwee ndị ndụmọdụ otú i nwere na mbụ.+ Mgbe ahụzi ka a ga-akpọwa gị Obodo Na-eme Ezi Omume nakwa Obodo Na-erubere Chineke Isi.+ 27 A ga-eji ikpe ziri ezi gbapụta Zayọn,+Jirikwa ezi omume gbapụta ndị Zayọn si esi na-alọta. 28 A ga-ebibi ndị nnupụisi na ndị mmehie n’otu mgbe.+ Ndị hapụrụ Jehova ga-alakwa n’iyi.+ 29 N’ihi na oké osisi ndị na-agụ unu agụụ ga-eme ha ihere.+ Ihere ga-emekwa unu n’ihi ubi* ndị unu họọrọ.+ 30 N’ihi na unu ga-adị ka nnukwu osisi akwụkwọ ya kpọnwụrụ akpọnwụ,+Dịkwa ka ubi mmiri na-adịghị. 31 Onye siri ike ga-aghọ ahịhịa kpọrọ nkụ. Ihe ndị ọ na-eme ga-aghọkwa icheku ọkụ. Ha abụọ ga na-ere ọkụ otu mgbe. E nweghịkwa onye ga-emenyụ ha.”
^ Aịzaya pụtara “Nzọpụta Jehova.”
^ Ma ọ bụ “onyenwe ha.”
^ Ma ọ bụ “ná ntụziaka.”
^ Ma ọ bụ “nwa na-enweghị nne na nna.”
^ Ma ọ bụ “na-egbu ọchụ.”
^ Ma ọ bụ “Iri ngarị.”
^ O nwere ike ịbụ na osisi na ubi a na-ekwu gbasara ha ebe a bụ ndị a na-anọ ekpere arụsị.